Ammas kanatti deebi'anii? Dozer takkitti ooyruu qunnaa keessa dhaabanii buufata xayyaaraa jaarraa jirra jedhan. Oromia Shall be Free |
bilisummaa May 4, 2018	1 Comment
Buufata Xiyyaaraa Yaaballoo ?
Yaa OPDO !!!
Uummata Keenya Goodina Booranaa Waggoota 27 kana keessatti sochii misoomaa kamuu irraa haalota adda addaan uggura turtan . #OPDO‘n dhakaa bu’uuraa Koolleejii , Yunversiitii kaa’uun hawaasa keenya soba turtan. Uummanni keenya hardhas rakkina bishaan dhugaatiifi furmaata hin arganne. Dhimmi Koolleejiifi Yuniversiitii deebii hin arganne .
Goodinni Booranaa hardhas akka baldhina isaaf Hospitaala lubbuu qabu takka hin qabu, namni keenya yoo dhibame gara Magaalota Hawaasaa , Walayitaa , Arbaaminicii deema.
Aanalee akka Areeroo , Taltallee keessatti Hospitaala hamma ijaarra jechuun hawwii qofaan bara meeqa Hawaasa keenya sobuun heddu miitan .Aanalee Goodinicha hardhas rakkina ifaa qabu .
Hayyee kan darbe dabree jira. Akkumma #OPDO’n haaromte “kaleessi hardha miti” jettan rakkoo Uummata kanaa bu’uura irraan furuun dirqamaa dha. Buufata Xayyaaraa baantan kana dura dhimmi daangaafi nageenyaa dursuun dirqama dha. Buufata xayyaaraan gaaffii Uummataatti golga gochuun gaaffii Uummataa ukkaamsuuf hin yaalinaa!!
Buufatni xaayyaaras akkuma bu’uuralee misoomaa kanaan dura dhakaan bu’uura kaa’amee lafarra harkifamaa jiru sanaa, akka boodatti hin deebine, akkasumas hojiin kun harka saamtotaa akka hin seenne fi sirnaan akka hojjatamu dhaamna .
Adeemsa gulantaa haromsaa keessa jirra. Waanti hundi galgala tokkotti akka hin taane ni hubbanna; garuu dhimmi nageenyaa wanta wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf MM FI PMNO gama Hawaasa Booranaa bu’uun gaaga’amaa fi miidhama haawasa keenya irrat dhaqqabeef gaaffiwwan bu’uuraa Horsiise Bulaa keenyaa maalidha wanta jettu gara hawaasa Booranaatti bu’uun akka Hawaasa dhageettan dhaamna.
Uummanni keenya uummata aadaa , duudhaa , safuu qabuuf fi Uummata sirna Gadaan bulu uummata hayyuudha. Yoo buutanii teessanii isaan dhageessan Barnoota guddaa fudhattu. Yoo dansa hojjatan isin jajabeessa yoo karaa irraa maqxan isin gorsa wanta taheef deema Hawaasa keenyaa dhageefadha!!
Previous Saamicha MIDROC irratti waan namuu beekuu qabu
Next “Dhimma Misooma Warqii Midrookiin wal qabsiisee aangoo naannoleen qabeenya uumamaa bulchuu irratti qaban ija seeraan maal akka fakkaatu
Waan isiin gaafadhu bu,uuraalen miisoma goodiina boranaa keessaa yoomii hojatamti akkasumii luubun ilmani nama yoomii du,uu lakifti